» “के विजय शाही आफैले” फिजाए आफै म ‘रेको यस्तो हल्ला ? “के विजय शाही आफैले” फिजाए आफै म ‘रेको यस्तो हल्ला ? – हाम्रो खबर
“के विजय शाही आफैले” फिजाए आफै म ‘रेको यस्तो हल्ला ?
हाम्रो खबर संबाद दाता 220 Views
“काठमाडौ । मंगलवार केही सामाजिक सञ्जालमा विजय शाहीको मृत्यु भएको भन्दै तस्बिर राखेर श्रद्धाञ्जली दिन थालेपछि प्रहरीले उनको खोजी गर्यो । उनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएका थिए । मेमोरी पावरका कारण चर्चामा रहेको भनिएका विजय शाहीले गलत दावी गरेको कुरा आएसंगै उनको तिब्र विरोध सुरु भएको थियो ।
“त्यसैको रिसमा केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उनको मृत्यु भएको खबर सामाजिक सञ्जाल भरी फैलाए । प्रहरीले त्यस्तो गलत कुरा सार्वजनिक गर्ने ब्यक्तिको पनि खोजी थालेको छ । विजय शाही भने कालिकोटमा भेटिएका छन् ।”
“कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहले उनी आफ्नो घरमा रहेको कुरा प्रमाणीत भएको बताएका छन् । तर उनी अस्वस्थ्य भने छन् । शाही निकट व्यक्तिहरुले नै उनको मृत्यु भएको भन्दै सामग्री पोष्ट गरेपछि भ्रम फैलिएको थियो । प्रहरीले त्यसको पनि खोजी थालेको छ ।आफूलाई चर्चामा ल्याउन उनले ‘मेमोरी किङ’ भएको दाबी गर्ने गरेका थिए ।”
“आफूमा अद्भूत क्षमता भएको दावी गरेर युट्युब तथा सामाजिक संजालमा चर्चामा आएका विजयी शाही आफैले मृत्युको झुटो खबर सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको पाइएको छ।”
“जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट का डिएसपी टंकबहादुर शाहीले विजयको मृत्युको हल्ला झुटो भएको बताए । प्रहरीका अनुसार शाही कालिकोट महाबु गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित घरमा नै भेटिएका छन्। शाहीको घरमा पुग्दा उनी टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका थिए। उनले पछिल्लो समय निकै त नाव भएका कारण आफूले म’ रेको हल्ला फिँजाएको स्विकार गरेका छन्।”